Umculo - i-hormone ewusizo yenjabulo, ayithuthukisi nje isimo sengqondo, kodwa futhi inhlalakahle, ixosha ubuhlungu, isiza ekulwa nezifo ezinzima.
Umculo uvuselela izikhungo ezijabulisayo ebuchosheni - ochwepheshe bachaza lo mphumela. Ngenxa yalokhu, kungadambisa, ukulwa nokucindezeleka ngisho nokunciphisa ukucindezelwa kwegazi. Njenge-adjuvant, kunconywa iziguli ezithweswa izivivinyo eziyinkimbinkimbi noma izinqubo ezide. Zama ukuqamba amahora ambalwa ngesikhathi sithwetshulwa - ungenalutho, ungenawo amagama, noma sneeze, noma uqale ...
Kodwa uma isiteshi somsakazo ozithandayo noma i-CD idlala kuma-headphone womdlali, lo msebenzi awubonakali kunzima ukuwenza. Ngonyaka odlule, iqembu labacwaningi base-United States likhishwe idatha ngokusho ukuthi iziguli ezilalele umculo - i-hormone ewusizo ewusizo ngesikhathi se-colonoscopy, zibekezelela kalula ngaphezu kweqembu lokulawula nezidalwa ezingezansi ezingadingeki. Idatha entsha ekuthatheni ukwelashwa komculo inikezwa elinye ithimba lamadokotela aseMelika: iziguli zabo ezinezinhlungu ezingapheli, ezilalele umdlali ngehora elilodwa ngosuku, ubuhlungu buyeke ngo-12-21%. Izinhlobo zomculo ezisebenza kuzo zombili izimo azizange zidlale indima. Ukujabulela imisindo yanoma yiziphi izinsimbi - kungakhathaliseki ukuthi igitare, ibhupipe noma ipiyano enkulu - nokuzama ukuzithatha kakhulu, futhi uvuselele amakhono akho engqondo: emva kwakho konke, isigqi, ingoma nomsindo wezwi "zifundwa" ezingxenyeni ezihlukahlukene zobuchopho.
Akukade kudala siqale ukukhuluma ngomculo - i-hormone ewusizo yenjabulo kanye nomphumela "we-Mozart". Imisebenzi yomqambi wase-Austria inamandla amakhulu okuthinta, kuhlanganise nezitho zombono. Esinye sezibhedlela zaseBrazil, kwahlolwa: iziguli ezingu-30 ezibhekene ne-glaucoma nsuku zonke imizuzu eyishumi kuphela zihlanganisa i-sonatas ka-Mozart yama pianos amabili. Ngenxa yalokho, umbono wabo wezinto ezibonakalayo waba nzima kakhulu uma kuqhathaniswa neqembu lokulawulwa kweziguli okufanele lichithe imizuzu efanayo-10 ngokuthula.
Uma uzama hhayi nje ukuba ulalele, kodwa futhi zama ukufunda ukudlala umculo ngokwakho - i-hormonone ewusizo, ungathola amabhonasi engeziwe.
Ukunambitheka nombala wabangane akunjalo. Ngomsindo - futhi. Ngamunye wethu ubona umculo ngendlela yawo, ngakho-ke awekho izindlela zokupheka zomculo ezivamile. Awekho izingoma ezimbi futhi ezinhle, ochwepheshe bathi, uFrank Sinatra wedwa unikeza impilo eyodwa, noFrank Zappa kwabanye. Kufanele ufune "imithi" yakho ngokwakho. Uma ulalele ama-CD, qaphela indlela imicabango yakho nokuphefumula kwakho kushintshana ngayo, ukuze uqonde kangcono ukuthi yini lokhu noma leyo ngoma inomphumela kuwe. Zibuze, uzizwa kanjani: ukuphakama kwamandla, induduzo, injabulo noma intukuthelo? Yenza uhlu lwadlalwayo lwakho, ubeke ama-discs - "umculo wokuphumula," "umculo wokuvusa," "umculo wokubuyisa imemori." Futhi uzohlala unomjikelezo wamagilisi ozosiza kunoma yisiphi isimo futhi unondle ngamandla afanele, kungakhathaliseki ukuthi uzizwa kanjani.
Umculo ubelokhu ukhona , futhi uhlala amaphilisi alele kakhulu. Kodwa akuwona wonke umculo, yebo. Ngaphansi kwemisindo ethile kungenzeka ukuthi ulale ngokukhululeka nangenjabulo, nakweminye imisindo yomculo - ngokuphambene, ukuvuka nokungahlali isikhathi esiningi. Konke lokhu akuthinteli kuphela izici ezithile zomculo, kodwa futhi kuqondiswa i-cortex yobuchopho bomuntu. Umculo umqondo ongenakulinganiswa kakhulu futhi ngabanye ukuthi abanye bethu bathanda ukulalela imisindo yomculo, kanti abanye abakubekezeli umculo. Konke lokhu kuncike, okokuqala, ngokucacile nokuzimela komuntu ngamunye.
Izifo zemetabolism: ukukhuluphala
Ubhontshisi weShea, izakhi zokwelapha
Umquba we-pizza ngaphandle kwemvubelo
Uma imali engeyona into esemqoka
U-Jessica Alba uthanda ukuthatha izibalo
Pate kusuka inkukhu isibindi
Imithetho yokuphepha yengane
Kungani siphosa amadoda ethu abathandekayo nokuthi singakuvimbela kanjani: Awukwazi ukuhamba
Indlela yokunakekela umuthi wenjabulo
Izakhiwo eziwusizo ze-mackerel
I-patties ne-cottage shizi
Usana olusha: imithetho yokunakekelwa kwengqondo
Ama-shrimps ane-curry sauce eluhlaza